- चलचित्र ‘तक्दिर’ छायांकनको तयारीमा
चलचित्र ‘तक्दिर’ छायांकनको तयारीमा
काठमाडौंः विजी बर्मा फिल्मस् प्रा. लि. को व्यानरमा नेपाली कथानक चलचित्र ‘तक्दिर’ निर्माण हुने भएको छ । सामाजिक विषयबस्तुमा आधारित रहेर चलचित्र निर्माण गर्न लागिएको चलचित्रका निर्देशक तथा लेखक शंकर अधिकारी घायलले बताए । निर्माण पक्षका अनुसार आगामी चैत्र २० गतेबाट छायांकन सुरु हुनेछ ।
नेपाली रजतपटका पुराना कलाकार एवम् नव कलाकारहरुको अभिनय चलचित्रमा हुने र हाल कलाकार चयनको प्रक्रिया भैरहेको चलचित्रकी प्रस्तुतकर्ता कला राईले बताइन् । चलचित्रमा रबि खड्का, श्रेया दुलाल, गंगा कुवँर, सागर गुरु चौलागाईं, राजु पौड्याल अनुबन्ध भैसकेका छन् । चलचित्रमा कृष्ण पाण्डेको छायांकन, देव मर्हजनको द्वन्द र राजन मर्हजनको नृत्य निर्देशन रहेको छ ।
चलचित्रलाई पूर्वका विभिन्न स्थानका साथै सिन्धुली र काठमाडौंमा छायांकन गरिने भएको छ । चलचित्रको गीतमा राजेन्द्र बजगाईँ र रेखा पौडेलको संगीत रहने छ । चलचित्रका गीतमा गायिका नित्या शिवा र राजेन्द्र बजगाईँको आवाज रहने भएको छ ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, फागुन ३०, ०६:५३